Mogadishu Journal » Guddoomiye Cumar Filish “Xilalka dowladda waxa loo salaxay ciyaalka Xaafada”
Mjournal :-Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish) oo ka hadlayay xaflad lagu soo dhoweynayay Taliye kuxigeenka cusub ee Booliska Soomaaliyeed Cusmaan C/llaahi Kaniif ayaa sheegay in xilalka dowladda beryahan loo magacaabo ciyaalka xaafada.
Cumar Filish ayaa sheegay in mas’uuliyiinta dowladda Federaalka ay xilalka u salaxeen ciyaalka xaafada, isagoo ugu baaqay inay doorkooda ka soo baxaan oo ay ka duwanaadaan kuwii ka horeeyay.
Waxaa uu sheegay in isaga, Taliyaha Booliska, Kuxigeenkiisa iyo Wasiirka Amniga ay isla yihiin ciyaalka xaafada sida uu hadalka u dhigay.
“Xilalka dowladda waxaa loo salaxay ciyaalka xaafada, marka waxaa rajeynayaa doorkooda inuu noqon doono door ka duwan dadkii ka horeeyay door wax ku ool ah is jaceylkooda iskaashigooda iyo waxqabadkooda inuu muuqdo ayaa rajeynayaa, in muddo ah magacaabista waxaa ku imaanayay qofkii aniga la ii weydiin lahaa aan tilmaami lahaa”ayuu yiri Guddoomiye Cumar Filish.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa maalin ka hor magacaabay Taliye kuxigeenka Booliska Soomaaliyeed Cusmaan C/llaahi Kaniif oo ah nin dhalinyaro ah, waxaana in muddo ah dowladdu waday magacaabista ragga dhalinyarada ah.